Maqal: Baarlamanka Puntland Oo Qodobo Soo saaray. – SBC
Maqal: Baarlamanka Puntland Oo Qodobo Soo saaray.
Posted by SBC Editor on Julaay 12, 2015 Comments
Baarlamanka Puntland oo dood uga socota maalmahaan aqalka Baarlamanaka ee Garoowe ayaa maanta go’aano soo saaray.
Baarlamanka Puntland ayaa ka doodayay xiriirka dowaladda Federaalka Soomaaliyan waxaana maanta kal fadhi dhacay lagu soo bandhigay shan qodob oo shirarkii socday iyo doodihii dheeraa lagu meel marshay.
Hoos ka aqriso qodobada:
3: Baarlamaanka Puntland waxa uu go’aan ku gaaray inaanayn sharci ahayn, guddiga dib u eegista Dastuurka DF, guddiga doorashooyinka, guddiga xaduudaha iyo arrimaha federaalka kamana shaqo gali karaan dhulka Puntland.
5:Baarlamaanka Puntland waxa uu dib u eegis ku samaynayaa kalfadhiga kan xiga qodobaddaasi dowladda Federaalka inay wax ka badashay oo dariikhii saxda ahaa kusoo celiso iyo in kale.